Mhinduro Inotangisa Inopindirana Sarudzo | Martech Zone
Muvhuro, April 29, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Sezvo makambani makuru emakambani ekushambadzira anosangana nekuwana mamwe mashandisirwo musanganiswa yavo yechigadzirwa, kazhinji panenge paine mukaha mukugona kwemutengi kumisikidza zvido zvekutaurirana. Kana iwe uchida email, iwe enda kune imwe saiti, kana iwe uchida nharembozha, imwe… kana iri SMS imwe futi. Maererano ne Forrester, 77% yevatengi vanoda kukwanisa kusarudza kuti mabhizinesi anokwanisa sei kuonana navo.
Kekutanga, Mhinduro iri kupa vatengesi kugona kuunganidza nekugadzirisa zvishuwo pane ese madhijitari uye epanyama anobata mapoinzi, uku vachideredza njodzi yemendenenzi inodhura nematare edzimhosva, zvese zviri mukati meimwe tekinoroji.
Mumakore mashoma apfuura, makuru mabrands ane mukurumbira mukurumbira akarohwa nematare edzimhosva kutsvaga makumi emamirioni emadhora kushambadzira kune vatengi pasina mvumo. Aya mhosho anodhura anoitika nekuti vashambadziri havana tekinoroji chaiyo yekubatanidza uye nekugadzirisa maneja zvido zvevatengi nemvumo munzvimbo dzese dzekudyidzana, kubva kuemail kuenda kune nharembozha kusvika panotengeswa. Responsys Interact Preference inoita kuti vashambadzi vatore iyi data nenzira kwayo, vozoishandisa mukubatana nedzimwe nhoroondo ye data, senge nhoroondo yekutenga uye huwandu hwevanhu, kuti vatumire mameseji asina kungosarudzika chete, asi zvakare kugamuchirwa. Steve Krause, Senior Mutevedzeri Wemutungamiri weChigadzirwa Management paMhinduro
Mhinduro Dzinopindirana Kuda inobvumira vatengesi ku
Gadzira maonero akabatana ezvaunofarira uye mvumo pese pese chiteshi - Mazhinji makambani ane akawanda masosi evatengi vanofarira dhata yakachengetwa munzvimbo dzakasiyana siyana dhatabhesi.
Unganidza zvaunofarira kwese uko vatengi varipo - vangave vari kushopira muchitoro, vachiita nemuchina paFacebook, kana vachivhura saiti mbozha, vatengi vanogona nyore uye zvinobudirira kugovana maitiro avanoda mabrands ekutaurirana navo.
Deredza njodzi yekuteerera - Responsys Interact Preference inovimbisa kururamisa kwemvumo yevatengi uye inochengeta iwo ruzivo munzvimbo yepakati, inonzwisisika, ichiita seimwe sosi yezvokwadi yezvinodiwa nevatengi.
Mukubatana nehupfumi hwehunhu, huwandu hwevanhu uye hwemagariro evanhu Mhinduro dzinotaridza vashambadziri, Responsys Interact Preference inopedzisa chimiro chevatengi - ichivandudza ruzivo rwevatengi uye kupa simba kuvashambadzi kuvaka hukama hwakadzika, hunogara uye hunobatsira nevatengi vavo.
Tags: zvinodiwamhinduroMhinduro Dzinopindirana Kudazvakabatana zvido
Apr 29, 2013 pa 9: 37 PM
Ndatenda nechinyorwa ichi! Ini ndinofunga zvakanyatso kunaka kuti kugona kuunganidza nekugadzirisa zvishuwo pane ese madhijitari uye epanyama anobata mapoinzi munguva pfupi ichave chinhu chekare!